May 19, 2009 Ogaden
Wadanka Siri Lanka oo awal loo yaqiin CEYLON oo anigu an ku xasuusto shaahi CEYLON ka iyo macawistii CEYLON ka ahayd ayaa ah wadan aad u beya’d qurux badan sidoo kalena ah wadan ay ka socdeen dagaalo dhiig badan ku daateen ilaa ku dhawaad 30ki sano ee la soo dhaafey.
Ururka LTTE oo sdiaad la socotaan u dagaalami jirey xaqa dadka Tamilka ah ee dagan Siri Lanka (Ceylon) ayaa maanta dagaalkoodii socday muddada ku dhow 30ka sano u muuqdaa in la soo gabagabeeyey. Haddaba dhowr su’aalood ayaa la iska weydiin karaa dhacdadan, su’aalahaas oo ay ugu weyntahay su’aasha ah urur muddadaas dheer soo dagaalamayey oo ay dowlada inta badan kalama adkaan soo ahaayeen sidee si dhib yar mudo kooban HILFAHA LOOGU QAADAY? Waxaa hadaba laga yaabaa iney runta burburkoodu noqon karto hal sabab ama dhowr sababood oo is biirsaday, balse qofkii arrimaha wadanka Sri Lanka iyo LTTE la socday wuxuu isweydiin kara dhowrkan arrimood oo kala gooni ah ama wada jira iney sababeen burburkooda.
Arrimuhuna waxay noqon karaan:
In ay dowladu soo xoogeysatey milatari ahaan iyo dhaqaala ahaan.
In ay jabhadu daciiftey oo loo awood sheegtey.
In ay ka goosashadii jabhada u ka goostey taliyihii qeybta bari u daciifiyey sandadii la soo dhaafey.
In dadka Tamil ka ah laftoodu ay ka daaleen dagaalka oo ay soo luminayeen taagerada LTTE.
In Jabhadu ka xanaajisey quwado kale, una guntadeen burburinteeda si dadban.
Qodabadan ka hadalkoodu waxay u baahantahy khibrad, aqoon iyo xogogaalnimo dheeraada ah oo la xiriirta arrimaha Siri Lanka (Ceylon). Run ahaantiina aqoonta intaa gaarsiisan uma lihi Siri Lanka, markaa waxaan qoraalkeygan ku soo koobi karaa ururin an soo ururiyey wararkii iyo warbixinadii laga qori jirey sanadadi la soo dhaafey wadankaas. Sidoo kalena waxaana ku dari doonaa arrin an u arkey iney sababtey ama qeyb libaax ka qaadatey burburkooda. Arrintaas oo ah faragalin dadban oo ay malaha sameeyeen reer galbeedka oo ka xanaaqey markey LTTE gudubtey “THE RED LINE”.
LTTE dadka qaar waxay ku dareen Liiska argagixisada, dadka qaarna waxay u arkaan xaq u dirir qaar kale oo badana fikrad kama haystaan ama ma daneeyaan arrimaha ka jira wadan iyaga ka fog iyo dad ayna aqoon.
Haddaba, taarikhada kooban ee wadankan (oo an ka soo xigtey nin an isla shaqeyn jirnay oo Chemistry Researcher ah) ayaa waxay tahay. Iney dad ahaan iyo luuqad ahaan ay wadanka ku noolyihiin labo qowmiyadadood oo kala ah (Sinhale iyo Tamil); diin ahaana ay ku noolyihiin afar qolo oo kala ah (Buddist, Muslims, Hindu iyo Christian kooban). Dadka ku hadla luuqada Sinhale ga aqlabiyadoodu waa Buddist sidoo kalena dadka ku hadla Tamil ka badidood waa Hindus waxayna xiriir wada dhalasho (malaha) la leeyihiin Tamil ka daga koonfurta INDIA ee gobolka Tamil-Nadu.
Ninkani wuxuu yiri, barigii isticmaarka Ingriiska waxaa si fiican u raacay Tamil ka waxaana iska ururiyeye Sinhale ga iyagoo diiniyan isaga ururinaya. Waxaa haddaba daka aad waxa u bartey iyo dadka CIVIL SERVANTS ku u batey Tamil (intii isticmaarka). Arrintan oo markii xornimad la qaatey is badashey maadaama ay Sinhales ku MAJORITY yihin. Keenteyna inaan Tamil ka waxa lala qeybsan oo kaliye balse loogu daray in la cadaadiyo (ilaa xad) sida MINORITY adduunka ku qabsata.
Arrimahan Tamil ku si kala gadisan iyo wakhtiyo kala duwan ayeey ka dhiidhiyen, balse waxay 1980s aasaaseen urur ay u bixiyeen LTTE (Tamil Tigers), waxaana madax u noqday nin la yiraahdo Velupillai Prabhakaran.
Ninkan wuxuu sameystey jabhad ku dhisan asluub adag, wuxuuna ahaa A REAL DICTATOR (Stalinist). Wuxuu dadaka ku maamulayeye si adag oo an nafta dadka la tixgalineyn, carrur yar yarna la BRAIN WASH gareeyey. Arrinta an anigu ururkiisa 1990s kula coloobay ayaa waxay ahayd mar an arkey dad MUSLIMS ah oo daga bariga Siri Lanka oo ay ciidamadiisu QAL-QALEEN si ay u bajiyaan oo ay deegaanka uga guuraan.
Hadal iyo dhamaan, sheekada LTTE waa arrin badd ah oo an la dhameyn karin sida dhacdo kasta, balse an u gudbo goorma iyo sidee ayuu Velupillai Prabhakaran, uga xanaajiyey reer galbeedka.
Waxaa ururka ninkan (LTTE) laguu xasuustaa inuu ahaa ururkii ugu horeeyey (in recent history) ee isticmaala SUCIDE BOMBING. Balse wxaa kaba sii daran iney noqdeen Jabhadii ugu horeysey ee sameysata ciidan cir (inta tabar teeda ah) ee inta diyaarado soo kiciso caasimada wadanka ee COLOMBO weerarta. Dhacdadan an hadda ka hor la arag waxay ka yaabisey dad badan, waxa kale oo malaha ay fikrad ka maqneyd ku soo kordhisey qaar badan, sidoo kalena malaha waxay ka xanaajisey dawladaha reer galbeedka oo ka cabsi qaba iney fikradaas qaataan dad iyo ururo ay is hayaan!
Markaad hadaba dib u fiiriso dhacdadii Sep. 11, 2001 ee ay diyaaraduhu galeen dhismihii New York, waxaad u garabeysaa reer galbeedka iney ka argagaxaan wixii
duulaya ee ayna iyagu lahayn ama koontaroolayn. Markaad haddaba fiiriso dagaalda ay reer galbeedku meelo badan kaga jiraan iyo ummadaha ay is hayaan cidii ay is leeyihiin waxay tuseysaa (ama u bilaabaysa) fikrad ka maqneyd iyagoo leh war sidana waad yeeli kartaan, wuxuu noqonayaa CADAWGOODA. Arrintan (sameynta ciidan cir)ayaa waxaan u arkaa iney LTTE u sameysey cadaw cusub oo dhaqaala ahaan, dibloomaasiyeyd ahaan iyo milatari ahaanba aad u xoog badan. Waxaase anan lagaraneyn (haddiiba ay jirto) sida cadawgooda cusub u uga qeyb qaatey burburintooda?!
Ugu dambeyntii, dad Sri Lanka ah oo Muslimin ah oo an arkey waxay ka siinaayeen naceybka ay LTTE u qabeen, waxayna badankoodu door bidayeen dowlada. Haddaba anigu, in kastoo laga yaabo iney yihiin Sri Lankan Tamils dad u dagaalamaya xaq ka maqan, markaan arkey dhacdadii 1990s ay ku gowgowraceen dad muslimin ah waxaan u arkayeye dad an naxariis lahayn oo qalafsan. Waxaase hubaal ah in taariikhdoda iyo burburkii soo gaaray halgankooda laga baran karo arrinta ah, inaad waligaa ka foojignaatoinaad sameysato cadaw cusub oo kaa xog iyo xeelad badan oo ugu yaraan kuu lug qabta kii ad is hayseen.